Isbedelka Siyaasadda Dowladda Soomaaliya Jawaari ka dib ee dowladaha Khaliijka – Madal Furan
Hoy > Warka > Isbedelka Siyaasadda Dowladda Soomaaliya Jawaari ka dib ee dowladaha Khaliijka
Isbedelka Siyaasadda Dowladda Soomaaliya Jawaari ka dib ee dowladaha Khaliijka
Muqdisho (Madal Furan) – Hogaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayay muuqataa inuu wax badan ka bedeli doono siyaasaddii Dowladda Federaalka Soomaaliya, wixii ka danbeeya iscasilada Guddoomiyihii Baarlamaanka DFS Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Xukuumadda DFS ayaa la dareemayey inay u kala laalneyd Laba awoodood oo xoog badan oo siyaasadda isaga soo horjeeda, kuwaasoo ku kala abtirsanaya Hogaanka dowladda Farmaajo iyo kooxaha mucaaradka oo siyaasiyiin miisaan lihi ligliga ku haysteen Madaxweynaha iyo Raysal Wasaaraha arrimo badan oo xagal daacin ku keenay dowladda Farmaajo.
Waxay dhegeheenu maqleen mooshin laga keenay Guddoomiye Jawaari, balse la isma weydiin yaa ka keenay?.
Guddoomiye Jawaari ayaan shaki ku jirin in Hogaanka dalka Soomaaliya ay u arkeen inuu marin u yahay fikradaha iyo kooxaha siyaasiyiinta qarmeerka ah ee ku abtirsada Dam Jadiid iyo ururo kale oo siyaasadeed.
Waxaa jira arrimo badan oo qarsoon balse Guddoomiye Jawaari uu keligiis og yahay, kuwaasoo la sheegay inay ugu weyn tahay meel marinta qaraaradda qaarkood marka ay dowladdu dan ka leedahay inaysan fuli doonin inta uu kursiga ku fadhiyo Guddoomiye Jawaari.
Horay ayaa Guddoomiye Jawaari uga sarqamiyey inuu diiday inuu wax ka saxiixo heshiisyo ay ka mid yihiin shirkaddaha Shidaalka ee dalka Soomaaliya doonaya inay ka soo saaraan shidaal ceeriin.
Xiriirka sii xumaanaya ee dowladdaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyana ah arrin kale oo Xukuumadda Soomaaliya ku dooneyso inay si debecsan xariga ugu goyso xiriirka diblomaasiyadeed ee Imaaraadka Carabtu la lahaa dalka soomaaliya.
Hogaanka Dowladda Soomaaliya oo ay muuqato inay dhexda uga jirto dagaalo dhinacyo badan leh oo kaga imaanaya gudaha iyo dibadda waxaa lagama maarmaan ula muuqatay in meesha laga saaro Iliga haray ee dowladihii hore la soo shaqeeyey, isla markaasna waaya aragnimo iyo xiriirka siyaasaddana wax badan kala socda.
Isbedelka Imaan doona.
Hogaanka Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la rumeysan yahay in wax badan uu ka curin doono isbedelka siyaasadeed ee Soomaaliya marka la helo Guddoomiye Baarlamaan oo la jaan qaadi doona Xukuumadda soomaaliya.
Dowladda Qadar oo ay is hayaan Imaaraadka Carabta ayaa waxay fursad u heli doontaa inay wax ka baandheyso siyaasadda Soomaaliya, waxayna galaangal ku leedahay Madaxtooyadda Villa Soomaaliya oo uu u fadhiyo wakiilka qarsoon ee Agaasimaha Madaxtooyadda Villa Somalia Fahad Yaasiin.
Isbedeladan ayaa qaarkood durba bilowdeen, kadib markii uu Wasiirka Gaashaandhigu ku baaqay in ciidamadda ay tababarto dowladda Imaaraadku ay la wareegi doonaan isla markaasna ay dowladda Sooamaliya siin doonto mushaharkooda iyo xuquuqda kale ee ay leeyihiin.
Warar laga helayo ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Dowladda Qadar ay durba ballan qaaday inay iyadu bixin doonto mushaharka ciidamadda iyo weliba wixii kale ee imkaaniyaad ah ee ay u baahdaan.
Ma aha arrin qarsoon in Hogaaanka DFS uu dhabarka u jeediyey dowladda Imaaraadka Carabta, waxa keliya ee la sugaa maalmaha dhowna waa iyadoo aynu maqalno in dalkaas xiriirka ay dowladda Soomaaliya u jartay.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa iyadu waxay liqi la’dahay in si sahlan ay dowladda Qadar ugaga adkaatay miiska siyaasadda ee Soomaaliya iyadoo ay Imaaraatiyiintu shinsanayaan in dalka Soomaaliya ay geliyaan Malaayiin lacago ah oo ay ku tababareen ciidamada Badda iyo kuwa beriga, Xiriirka ganacsi ee ganasatada Soomaalidu ku leedahay dalka Imaaraadka iyo weliba xiriirkii soo jireenka ahaa kala dhexeeyey Soomaaliya.
Dadka fallanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa rumeysan in dowladda Imaaraadka Carabtu ay eersatay heshiiskii ay sida indho la’aanta ah kula gashay maamulka Somaliland, bartaasina ay tahay mida habaca ku riday siyaasadii ay ka lahaayeen dalka Soomaaliya.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa hadda qorsheyneysa inay qaboojiso xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan dowladdaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carata, waxaana ay casumaad u fidiyeen Madaxweyne Farmaajo.
Marti-qaadkan ayaa abuuri kara in mar kale xaaladda faraha ka sii baxaysa ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carbta uu dhimo xawaarihii uu socday isfahmi waaya u dhexeeya Labadda dal.
Dowladdaha xulufadda la ah Sacuudiga ee Khaliijka Carabta ayaa xiligan ay indhahoodu qabteen xiriirka sii xumaanaya ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, waxaase hadal aysan jecleysan bulshadda Soomaaliyeed ka soo yeeray dalka Baxreyn oo Soomaalida ku sheegay Kuwo aan abaal laheyn.
Axmed Madoobe oo sheegay inaysan jirin cida cid ka adkaan karta
Ciidamo la wareegay deegaano ka tirsan degmada Jamaame